Shaqada Sameeya Sinnaanta, Sannadka Sannadka 2016 iyo Beyond
Dib-u-eegista Sanadka Cusub ee Kate Wolford
Marka aan bilowno sanad cusub, waxaan si aad ah u xasuustaa masuuliyada cabsida leh iyo mudnaanshaha aan ku leenahay horumarinta hadafka Hay'adda McKnight Foundation. Waxaanu leenahay noocyada kala duwan ee kala duwan ee danaha barnaamijka, dhammaan tilmaamaya hadafka lagu xoojinayo bulshooyinka, dhaqaalaha, iyo deegaanka deegaanka sii jiri kara.
Madaxweynaha McKnight Kate Wolford oo ka socda shir caalami ah oo cimilada ee Paris, December 2015
Labo arrimood - Isbeddelka cimilada iyo farqiga jinsiyadeed - ayaa ahaa maskaxdaynii ugu fiicnaa sannadkii hore oo soo dhawaaday, gaar ahaan dhacdooyinkii dhowaan soo bandhigeen horumarka isbeddelka ee aan samayn karno marka aan isku imaadno, iyo sidoo kale cawaaqibyada dhici kara markaan samayno maya. Xaliyadu mar walba ma ahaato mid fudud, laakiin jihada aan u baahanahay in aan safarno waa mid aad u cad.
Shirarka cimilada ee cimilada
Bishii Diseembar, waxaan markhaati u arkey taariikhda sameynta shirka cimilada ee caalamiga ah ee Paris. Heshiiska xooggan ee lagu gaaray shirku wuxuu suurtagal noqon karaa oo keliya sababtoo ah kacdoon xoog leh oo ay dhiseen isbahaysi daneeyayaal kala duwan oo hogaaminaya shirka. Tani waxay ka muuqatay qorshayaasha qaranka shakhsi ahaaneed ee la soo bandhigay ka hor shirka; ficil adag oo ay sameeyaan dowladaha iyo magaalooyinka caalamka; tirada sii kordhaysa ee sii kordhaysa ee maalgashadayaasha hay'adaha iyo shirkadaha waaweyn ee soo saaraya khatarta maaliyadeed labadaba khatarta maaliyadeed ee ay keentay isbeddelka cimilada iyo fursadaha dhaqaale ee lagu beddelayo mustaqbal hoose oo kaarboon; iyo codad badan oo badan oo ka mid ah bulshada rayidka ah - dhalinyarada, beelaha diinta, macaamiisha, kooxaha muwaadiniinta, iyo kuwa aan faa'iido doonka ahayn - iyaga oo ku baaqaya waxqabad deg deg ah.
Waxaan horeba u aragnaa saameynta isbeddelka cimilada ee nagu wareegsan - dab-damisyo, abaaro ba'an, daadad jiilaal. Waxaan ognahay inaan u baahannahay inaan si dhakhso ah u xoojino isbadelkayaga mustaqbalka yar-yar. Waddada u horseedaysa, iyada oo la marayo, iyo ka sii weyn ee Paris waxay mar horeba ujiraysaa inay noqoto maalgashiga maalgashiga maalgashiga hadda jira iyo tayada sii kordhaya ee tiknoolajiyada waxtar leh. McKnight waxay taageertaa Hoggaanka Midawga ee ku-meel-gaadhsiisan iyada oo loo marayo deeq-lacageedka iyo isu-ururinta, oo aan isticmaalno doorashadayada sida maalgaliye iyo milkiilaha hantida si uu u caawiyo bixinta balanqaadkii heshiiska caalamiga ah.
Kooxda Northside Funders Group
Raadinta Saamaynta Isku Dhaca Minnesota
Sida aan si degdeg ah ugu baahannahay inaan u tagno meeraha kaliya ee aan ugu yeedhno guriga, sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan ka qaybgalno bulshooyinka aan hoos udhicin ee ka jira gobolkaaga hooyo. Waxaan arki karnaa saameynta farqiga u dhaxeeya sinaan la'aanta iyo jinsiga ee Minnesota iyadoo loo marayo xogta ku saabsan waxbarashada, lahaanshaha guriga, shaqada, dakhliga qoyska, iyo wax ka badan. Sanadkii la soo dhaafay waxaa la soo gebogebeeyay boogo dhaadheer, oo muddo dheer ka maqnaayeen sinnaan iyo ka-reebitaan ayaa la furay oo la dhigay meel waqooyiga Minneapolis ah. Waxay ahayd xusuus xasaasi ah oo ka danbeeyay tirokoob kasta waa bani-aadmi. Waxaan ognahay inaan u baahannahay inaan si dhakhso ah u xoojino isbedelkeena ku aaddan xaalad dheeri ah oo loo siman yahay oo leh fursado dhan. Iyada oo loo marayo deeq-lacageedka iyo ka-qaybgalkeena wadashaqeyn ee is-dhex-gala iyo isku-xirnaanta qaybaha bulshada, dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxaan sii wadeynaa inaanu ka shaqeyno isbeddel nidaamsan oo bixiya ballanqaadkii barwaaqada guud.
Marka aynu ku dadaalno sidii loo abuuri lahaa bulsho siman, deganaansho waara, iyo wax ka qabashada dhammaan arrimaha ku jira faylalkaaga, waxaan sanadkan soo galeynaa dareen ballaaran oo ballanqaadyo ah, ka qaybqaadasho firfircoon, iyo adkeysiga dadaalkeena. Sida had iyo jeer, waxaan ku faraxsanahay xiriirada xooggan oo wax ku ool leh oo leh garabyo badan oo ka mid ah deeq bixiyayaasha, lammaaneyaasha, iyo daneeyayaasha kale ee qaybaha iyo arrimaha. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno sanadkan soo socda iyo wixii ka dambeeya.
Isqorista bogga Twitter
Mawduuca: Cilmi-badeedka & Tamarta Midwest, Gobolka & Bulshada